यात्रामा पैसा बचत गर्न सल्लाह
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » यात्रामा पैसा बचत गर्न सल्लाह
गेस्टपोस्ट • समाचार • पर्यटन कुराकानी • यात्रा रहस्य • विभिन्न समाचार
धेरै मानिस यात्राको लागि धेरै पुरानो हुनु भन्दा पहिले उनीहरू सकेसम्म विश्वको हेर्न चाहन्छन्।
नयाँ संस्कृतिहरू र वरपरका ठाउँहरूमा सुन्दर स्थलहरू हेर्नको लागि एक्स्पेक्टि Fromबाट यात्राको लागि त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन्। त्यसोभए तपाईं किन गर्नुहुन्न?
ठिक छ, यो वास्तवमा संसारमा सस्तो चीज छैन। तपाईको उडानहरू, आवास र सामान्य खर्चहरूको बीचमा, यो वास्तवमै केहि चीज होइन जुन तपाई हप्ताको ज्यालामा गर्न सक्नुहुनेछ।
तर राम्रो बानी, प्रतिबद्धता, र चलाख सोच संग, विदेश यात्रा को लागी पैसा बचत गर्नु एकदम सजिलो हुन सक्छ।
तपाईंको बिल हेर्नुहोस्
तपाईंको उपयोगिता बिलहरूले तपाईंको वालेटबाट ठूलो अंश लिन सक्दछ। भाग्यशाली रूपमा, त्यहाँ केहि तरिकाहरू तपाईं तिनीहरूलाई काट्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो जीवनशैलीमा केही बानीहरू लागू गरेर आफैलाई सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। यी साधारण कुराहरु हुन् जस्तै विन्डो खोल्नको विपरित एयर कन्डिसनको प्रयोगको तुलनामा, छिटो वर्षा हुने, वा बत्तीहरू बन्द गरेर तपाईलाई वास्तवमै चाहिने आवश्यक छैन। यी ठूला पैसा बचतकर्ता जस्तो नहुन सक्छन्, तर समयको साथ तपाईं आफ्नो बिलमा फरक देख्नुहुनेछ।
तपाईं आफ्नो व्यवसायमा यी बानीहरू पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ। थप कटौतीको लागि, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ उपयोगिता बोलीकर्ता। यहाँ तपाईको बिलमा उद्धरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको पैसाको लागि सब भन्दा बढी प्राप्त गर्न।
प्रतिबद्ध र लगातार रहनुहोस्
रोम एक दिनमा बनाइएको थिएन, मतलब तपाईले पनि एक दिनमा देख्न बचत गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं एक धनी पैसा को एक बचत राशि को लागी धैर्य को लागी जाँदै हुनुहुन्छ। यो प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ताको चीज हो। बचत भनेको त्यस्तो चीज होइन जुन तपाईले महिनमा एक पटक मात्र याद गर्न सक्नुहुनेछ र यसको साथ कहिँ पनि पुग्ने आशा गर्नुहोस्। आफ्नो खर्च संग राम्रो निर्णय लिनुहोस्। यसले तपाईको शौचालय कागजको गुणस्तर केहि महिनाका लागि कम गरिरहेको हुन सक्छ वा केहि अनावश्यक चीजहरू बेच्न सक्छ जुन परिवारमा मात्र धुलो स gather्कलन गर्दछ। यदि तपाईं यसको साथ अर्थपूर्ण लम्बाइको लागि छडी रहन सक्नुहुनेछ, तपाईं आफ्नो जीवनको समय भएको त्यो विमानमा हुनुहुनेछ।
तपाईं के खानुहुन्छ हेर्नुहोस्
खाना महँगो छ, खास गरी जब तपाईं आफैले यसलाई बनाउँनुहुन्न। जब तपाइँ काममा खराब दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ, एउटा ठूलो ठूलो तातो खाना आदर्श देखिन्छ, हैन? हेम स्यान्डविचको तुलनामा यो पनि महँगो छ, तपाईं घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ तपाइँको घरको खाजाको साथ विशेष गरी रचनात्मक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईं आफ्नो खाजा मा हरेक दिन किन्न कि तातो भोजन प्राप्त गर्न रोक्छ। यस तरिकाको बारेमा सोच्नुहोस् यदि तपाई हप्ताको पाँच दिन खाजामा प्रति दिन १० डलर खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईले एक महिनामा २०० डलर बचाउनु हुनेछ।
कफि हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यसले हामीलाई लात दिन्छ, साथै यसमा केहि सामाजिक पक्ष पनि राख्दछ। तर के तपाईं वास्तवमै तपाईंको कफीमा यति धेरै खर्च गर्नु आवश्यक छ? स्टारबक्सको ठूलो कल्पित कफी आकर्षक हुन सक्छ, तर के यो तपाईलाई पाउन सक्ने better २ कफि भन्दा धेरै राम्रो छ? त्यसैले यदि तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा काट्न सक्नुहुन्न भने, कम्तीमा तपाईंको कफी खर्च घटाउन हेर्नुहोस्।